Ganacsiga Suuqa labaad ee ugu weyn Muqdisho oo xiran – Balcad.com Teyteyleey
Ganacsiga Suuqa labaad ee ugu weyn Muqdisho oo xiran
Waxaa gabi ahaanba xiran maanta ganacsiga Suuqa labaad ee Somaliya Suuq Bacaad, kadib markii Maamulka Degmada Yaaqshiid amar ay ku bixiyen in aanan la furi karin goobaha ganacsiga Degmadaasi.
Ciidamo ka amar qaata Gudoomiyaha Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir oo u tagay dadka ganacsatada ah ayaa ku amray dadkii inaysan furi karin goobaha ganacsiga Degmadaasi.
Ciidamada ayaa u sheegay dadka ganacsatada ah amarka inuu soo bixiyay Gudoomiyaha Degmada, qofkii fura goobtiisa ganacsigana laga qaadi doono lacag ganaax ah oo ku aadan fulin la’aanta amarka Gudoomiyaha uu soo saaray.
Nin ka tirsan ganacsatada Suuq Bacaad ayaa sheegay sababta lagu haysto ganacsatada inay tahay sheegista dadkii shalay Suuqa dhexdiisa ku dilay nin ka tirsanaa Ciidamada Canshuuraha Dowladda hoose ee Muqdisho oo rag hubaysan ay toogteen.
“Ciidanka ayaa noo yimid waxay na dhaheen ma furi kartaan goobaha ganacsiga,illaa aad ka sheegtaan dadkii shalay dilka ka gaystay Suuqa dhexdiisa, waadna arkeyseen dadkaasi, qofkii fura goobtiisa ganacsiga lacag ganaax ah ayaa laga qaadi doonaa.” Ayuu yiri qof ka mid ah ganacsatada Suuq Bacaad.
Tani ayaa u muuqata mid lagu caburinaayo ganacsatada,maadaama dadkii haddii ay sheegaan dadkii dilka gaystay ay ka cabsi qabaan in la bartilmaameedsado, sababo ku aadan inaysan jirin qof ka difaaceysa Shabaabka.
Raggii shalay dilka ka gaystay Suuqa Ganacsiga ee Suuq Bacad, ayaa waxa ay ka tirsanaayeen Ururka Al-Shabaab, waxayna ka baxsadeen goobtii dilka ay ka gaysteen.
The post Ganacsiga Suuqa labaad ee ugu weyn Muqdisho oo xiran appeared first on Ilwareed Online.
Haweeney loo magacaabay xisaabiyaha guud ee Qaranka
Italy-Somalia military parts trafficking (2)